ကာဗွန်အခွန်သည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပန်းတိုင်များ (SDGs) အောင်မြင်ရန် အင်ဒိုနီးရှားအတွက် အဖြေတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည် – WorldRef
အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ညီမျှသော (CO75e) တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် ကာဗွန်အခွန် Rp2ကောက်ခံရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချသည့် နည်းပညာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်လက်တွေ့ကျလဲ။
Ganesha University of Education ၏ သင်ကြားရေး ဝန်ထမ်းများ၊
လောလောဆယ်တော့ အစိုးရက စီစဉ်နေပါတယ်။ "ကာဗွန်အခွန်" အကောင်အထည်ဖော်မှု အင်ဒိုနီးရှားတွင် စီးပွားရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန် သေချာစေရန်၊ ယင်းတို့အနက် တစ်ခုမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတု အကျပ်အတည်း၏ သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
ကာဗွန်ခွန်ဆိုသည်မှာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကို ကျော်လွန်သည့် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ထုတ်ပေးသည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် ကောက်ခံသည့် အခွန်ဖြစ်သည်။ ဤအခွန်ကိုလည်း ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများအပေါ် ချမှတ်ထားသည်။ အခြားဆိုးကျိုးအမျိုးမျိုး ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကာဗွန်အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းသည်ပင် ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အလားအလာရှိသည်။ အပိုဆောင်းဝင်ငွေ တိုင်းပြည်အတွက် Rp 57 ထရီလီယံ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ဤအခွန်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် အစိုးရကို အောင်မြင်အောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) သို့မဟုတ် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်များ (SDGs) ဟုခေါ်သည်။
SDGs များသည် ပြည်နယ်အစိုးရများ၏ ကတိကဝတ်များဖြစ်သည်။ ကဏ္ဍ ၁၇ ခုတွင် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး - အစားအသောက်၊ ကျား၊ မ၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရာသီဥတုအထိ - သို့မှသာ နောင်လာနောက်သားများ၏ လူနေမှုဘဝ ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေရန်။
ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်သည်။
ကာဗွန်အခွန်ကောက်ခံရန် အစိုးရ၏ အစီအစဉ်သည် SDGs တွင်ပါရှိသော ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အဓိက ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အစိုးရကိုယ်တိုင်က အကြမ်းဖျင်း ဖော်ပြထားတယ်။ SDGs ၏ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များ အင်ဒိုနီးရှားသည် 2030 တွင်အောင်မြင်ရန်လိုသည်။
Point 13 သည် အစိုးရ၏ သက်ရောက်မှုများကို တန်ပြန်ရန် ပစ်မှတ်များကို ရှင်းပြထားသည်။ ရာသီဥတုအကျပ်အတည်း - တစ်ခုက ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ရေရှည်လျှော့ချခြင်းမှ တစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင် အစိုးရက ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရန် ရည်မှန်းချက်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ 29 အားဖြင့် 2030%.
ယင်းအချက်ကို သိရှိနိုင်ရန် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအပါအဝင် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးမှ တက်ကြွစွာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ လိုအပ်ပါသည်။
ဤတွင်၊ ကာဗွန်အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးတို့ကြား ဟန်ချက်ညီအောင် ဖန်တီးပေးကာ ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်း၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို တိုးမြင့်လာစေနိုင်သည်။
ကာဗွန်အခွန်က ဒါကို နည်းလမ်းလေးမျိုးနဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
1. သက်ဆိုင်သူများထံမှဖိအားပေးမှုပုံစံ (သက်ဆိုင်သူများ)ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကို ဆန့်ကျင်သည်။
ထိုအချိန်တွင် စက်မှုကဏ္ဍသည် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြေမီးလောင်တတ်တဲ့ ဆီအုန်းလုပ်ငန်း။
အစိုးရမှ ကိုယ်စားပြုသည့် ကျယ်ပြန့်သော အသိုက်အဝန်းသည် ဤဆိုးကျိုးများကို လျော့ပါးသက်သာစေရန်နှင့် SDGs ၏ပန်းတိုင်များကို ပံ့ပိုးရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို “တွန်းအားပေး” နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် ဩစတေးလျမှ 2020 သုတေသနစာတမ်းက ဖော်ပြသည်။ အစိုးရများသည် မြင့်မားသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များ ပေးဆောင်ရာတွင် ပါဝင်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။
ဩစတေးလျအစိုးရက စီးပွားရေးသမားများသည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် တာဝန်ရှိရုံသာမက လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင်လည်း မြင့်မားသော ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်သည်။
ဤဖိအား၏ပုံစံတစ်ခုမှာ ကာဗွန်အခွန်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသောစည်းမျဉ်းများ တည်ရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဤကာလအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုသည် လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်များအပေါ် အဆိုးမြင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း ယင်းသက်ရောက်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိမည့် ယန္တရားမရှိပေ။
ကာဗွန်အခွန်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းများသည် သက်ဆိုင်သူများထံမှ ဖိအားပေးသည့်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသာထင်ရှားစွာ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများသည် အထူးသဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေပါသည်။
2. ကုမ္ပဏီများအား ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချသည့် နည်းပညာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အားပေးပါ။
ကာဗွန်အခွန်က ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကို ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းစေမယ့် ထုတ်ကုန်တွေကို ဆန်းသစ်တီထွင်ဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အချို့သော လုပ်ငန်းရှင်များဥပမာအားဖြင့်၊ အသစ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။
သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းရှိ အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော နည်းပညာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် မြင့်မားသော ကတိကဝတ်များရှိသည်။
အဲဒီထဲက တစ်ခုက အဆောက်အအုံတစ်ခုပါ။ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ.
3. ရာသီဥတု အကျပ်အတည်း လျော့ပါးရေး ပရောဂျက်များအတွက် ရန်ပုံငွေကို လွှဲဖယ်ပါ။
ကာဗွန်အခွန်ကောက်ခံမှုမှရရှိသောရန်ပုံငွေများကို ရာသီဥတုအကျပ်အတည်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ရပ်ရွာလူထုထံမှ ပံ့ပိုးကူညီခြင်းစသည့် အစီအစဉ်များအတွက် အစိုးရမှ လုံးလုံးလျားလျားအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော အနာဂတ်အစီအစဉ်အချို့ ရာသီဥတုကျေးရွာများ အားကောင်းစေခြင်း။ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍ.
ဥပမာ, အိုင်ယာလန်အစိုးရ 2020 တွင် စီးပွားရေးအရ ထိခိုက်လွယ်သော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ အားကောင်းစေရန် ကာဗွန်အခွန်ကောက်ခံမှုမှ ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုနေသည်။ SDGs များ၏ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်စေရန်အတွက် ဤရန်ပုံငွေကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။
ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် စိုးရိမ်မှု မြင့်မားသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အစိုးရအနေဖြင့် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
၄။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအား ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သို့ ပြောင်းလဲရန် အားပေးပါ။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ရုပ်ကြွင်းစွမ်းအင်အပေါ် အင်ဒိုနီးရှား၏ မှီခိုအားထားမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု၏ အကြီးမားဆုံးအရင်းအမြစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ရောနှောအသုံးပြုမှု အင်ဒိုနီးရှားကို ပစ်မှတ်မထားသေးပါဘူး။.
2020 တွင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ရောနှောမှုသည် 11.20% အထိ ရည်မှန်းထားပြီး၊ 2025 မှာ 23% ရောက်ဖို့၊.
ကာဗွန်အခွန်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် SDGs ၏ ရေရှည်ပန်းတိုင်များကို သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် စီးပွားရေးအရနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အပြုသဘောဆောင်သော တွန်းအားပေးမှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဲ့သို့သော စက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။ နေစွမ်းအင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပေါင်းစပ်ပါ။
စီးပွားရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထူထောင်ရန် ရှည်လျားသောလမ်း
ကာဗွန်အခွန်ဆောင်ခြင်းသည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ရေရှည်တွင်၊ အထူးသဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် SDGs ပန်းတိုင်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည် ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရန်ပုံငွေများကို ဆွဲဆောင်သည်။ နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန်။
သို့သော်လည်း အင်ဒိုနီးရှားတွင် ကာဗွန်အခွန်စည်းကြပ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် အစိုးရအတွက် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စိန်ခေါ်မှုများကို သေချာပေါက် ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မငြိမ်မသက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စက်မှုကဏ္ဍတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု အပြောင်းအလဲသည် ငွေကုန်ကြေးကျများပြီး စားသုံးသူများအတွက် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာနိုင်သည်။
ဤမူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် အခြားသက်ဆိုင်သူများနှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဤမူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပါတီအားလုံး၏ ရေရှည်ကတိကဝတ်လည်း ရှိနေပါသည်။
ကာဗွန်အခွန်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် နယ်ပယ်တွင် တိကျသေချာသော အကဲဖြတ်မှုဖြင့် တဖြည်းဖြည်း လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် အခုမဟုတ်ရင် ဘယ်အချိန်က စဖို့ကောင်းလဲ။
ဤဆောင်းပါးကို ဩဂုတ်လ 26 ရက်၊ 2021 ခုနှစ် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Bahasa တွင် The conversation မှ မူရင်းအတိုင်း ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး အဆိုပါအကြောင်းအရာနှင့်အညီ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives ၄.၀ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်သူ့လိုင်စင်။ သင်သည်မူရင်းဆောင်းပါးကိုဖတ်နိုင်သည် ဒီမှာမရ။ ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြသောအမြင်များသည်စာရေးသူတစ် ဦး တည်းသာမဟုတ်ဘဲ WorldRef ၏အမြင်များဖြစ်သည်။